Amba Cali Ameriko oo Maanta Kormeeray Suuqyada Xaafada Ilsii Kana Dukaameystay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiyo dalka Kenya Maxamed Cali Nuur (Ameriko) ayaa maanta kormeer ku yimid xaafada Islii oo ay soomaali badan deganyihiin kuna ganacsadaan.
Ujeedada kormeer safiirka ee xaafada Islii ayaa aheyd u kuur galidda xaaladaha ammaanka iyo ganacsiga ee xaafada.
Safiir Cali Ameriko ayaa waxaa xaafada ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan xafiiska xildhibaanka laga soo doorto Count-ga Kamakunji oo ay ka tirsantahay xaafada Islii.
Safiir Maxamed Cali Nuur Ameriko ayaa ku soo wareegay suuqyada waaweyn ee xaafada Islii,isagoo halkaasi ka dukaameystay.
Safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Nuur ayaa sidoo kale fariistay goobaha lagu shaaxeeyo oo ku yaala xaafada Islii,isagoo halkaasi kula kulmay kulana sheekeeystay odoyaasha xaafada.
Odoyaasha iyo wax garadka xaafada Islii ayaa soo dhaweeyay kormeerka uu maanta safiirka ku yimid xaafada,waxana ay ugu baaqeen safiirka in aysan noqon booqashadii ugu dambeysay oo uu mar kasta yimaado xaafada si uu ula socdo xaaladaha ka jira xaafada.
Safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiyo dalka Kenya Maxamed Cali Nuur Ameriko ayaa ku amaanay xildhibaan Yuusuf Xasan oo wax badan ka qabtay dhismaha wadooyinka xaafada Islii,kuwasi oo kor u qaaday ganacsiga xaafada.
Ambassador Cali Ameriko ayaa ugu baaqay dadweynaha in ay ka ganacsadaan oo ay ka dukaameystaan xaafada Islii.
Safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Nuur Ameriko ayaa mar kasta soo booqdo xaafada Islii oo ay Soomaalidu degantahay si uu uga war haayo xaaldaha xaafada.
Sawir qaade:-C/raxmaan Cumar Cabdi(Somali)